Thulo Parda / Sano Parda | Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more - Part 90
पैसामा किचकिच मन पराउँदिनन् नम्रता
अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ नेपालकी महङ्गी नायिकामा पर्छिन् । उनी थोरै सिनेमामा राम्रो काम गर्न रुचाउने अभिनेत्री हुन् । सिनेमा सानो संसारबाट नेपाली सिने जगतको संसारमा प्र..
फागु निर्देशक सम्झना र फोटोपत्रकार विकास रौनियारको म्यारिज एनिभर्सरी : १८ बर्षसम्म भएन सामान्य मनमुटाव पनि
फागु निर्देशक सम्झना उप्रेती रौनियारलाई खुसी हुने दुई कारण मिलेको छ । उनले निर्देशन गरेको चलचित्र फागु यही फागुन ७ मा रिलिज हुँदैछ । अर्को खुसी, उनको बैवाहिक जीवनले सफल..
कामप्रतिको मायाले सिने क्षेत्रमा टिकीरहेको छु : राजेश हमाल
राजेश हमालले, २० बर्ष भन्दा बढ्ता समय नेपाली चलचित्रमा बिताएका छन् । कुनै एक समय थियो , मनपर्ने हिरो को भन्दा, प्रायका मुखबाट राजेश हमाल भन्ने उत्तर आउँथ्यो । त्यो क्रे..
विल्सन विक्रम राई (तक्मे बुढा) आजदेखि २९ वर्ष लागेका छन् । वि.सं २०४३ साल माघ १५ गते जन्मिएका तक्मे बुढा आफ्नो जन्म दिनमा आफ्नै गाउँमा पुगे । लोकप्रीय हाँस्य कलाकारको प..
पशुपती प्रसाद हेरेपछि गाली खानुपर्दैन भन्नेमा ढुक्क छु : निर्देशक दिपेन्द्र के खनाल
निर्देशक दिपेन्द्र खनालको छैठौँ फिल्म हो –पशुपती प्रसाद । आजैदेखि यो सिनेमा देशैभर प्रदर्शन भईरहेको छ । यसअघि उनले चपली हाईट, झोले लगायतका सिनेमा निर्देशन गरिसकेका छन् ..
हाम्रो मुभिप्रति दर्शकको मोह बढ्दो, इन्टरनेटबाट नेपाली फिल्म हेर्ने प्रक्रिया थप सहज ।
हाम्रो मुभि डटकमप्रति विदेशमा रहेका नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकको मोह बढ्दै गएको छ । युट्युबमा नपाइने नयाँ नेपाली फिल्म www.hamromovie.com मा उपलब्ध हुने भएपछि यसप्रति ..
फिल्मको पोष्टरमा मारिन्थ्यो चाबी : पशुपतीप्रशादका हिरो खगेन्द्रको रमाईला अनुभव
खगेन्द्र लामीछाने, पशुपती प्रशाद फिल्मका मुख्य पात्र हुन् । सानो कद, चिटिक्क जिउडाल, गहुँगोरो वर्णका खगेन्द्र आफुलाई हिरो भनिहाल्न रुचाउँदैनन । भन्छन् – म आफुलाई हिरो भन्दा पनि कलाकार भनेर चिनिन चाहन्छु । म हिरो होईन । अहिले चलचित्रको कथा फेरिएको छ । चलचित्रमा प्रयोग हुने प्रबिधी आधुनिक छ । त्यहीअनुशार पात्र पनि फरक छन् [&helli..
फागुन २१ गते परिक्षामा कस्ले मार्ला बाजी डि.सि.ले कि के.सि.ले ?
बुधबार मध्य माघको कठांग्रिने चिसोलाई बिर्साउने गरि दिनेश डि.सि.ले आज आफु निर्देशित सिनेमा फुलै फुलको मौसम तिमीलाई को ट्रेलर सार्वजनिक गरेका छन् । ट्रेलर सार्वजनिकसँगै सिनेमा फुलै फुलको मौसम तिमीलाई को बजार अनुमान गर्न थालिएको छ । आज विभिन्न अनलाईन पोर्टलहरुमा प्रकाशित समाचार अनुसार, ट्रेलरले पुरै सिनेमाको झल्को दिएको उल्लेख गरेक..
शिशिर भण्डारी, सञ्चारकर्मीसँगै कमेडीयन र कलाकार पनि हुन् । रेडियो अडियो सुन्ने र टिभी फिल्मी हेर्नेका लागि शिशिर भण्डारी, केहि वर्ष अघि देखिकै परिचित नाम हो । चलचित्र होस्टल, लभसभ पछि सिने क्षेत्रका कलाकारको रुपमा पनि उनलाई चिन्न थालीयो । यस्तै, अहिले महोत्सवहरुमा व्यस्त हुन थालेका छन् । दर्शक हँसाउन कमेडीको साथमा गतिलो उद्घोषण ..
चलचित्र विकास बोर्डको सदस्यमा कलाकार उत्तम केसी नियुक्त भएका छन् । सुरेश दर्पण पोख्रेल पाँच महिनादेखि अमेरिकामा रहेका कारण सदस्यमा केसीलाई नियुक्त गरीएको हो । बोर्ड सदस्यमा केसी नियुक्त भएसँगै सुरश दर्पण पोख्रेलले आफ्नो गम्भीर ध्यानार्कषण भएको जनाएका छन् । निरङ्कुश शैलीमा बोर्ड सदस्य नियुक्त गरीएको भन्दै उनले फेसबुकमार्फत प्रेस ..
बहुप्रतिक्षित चलचित्र ड्रीम्सको नयाँ गीत सार्वजनीक भएको छ । करिब १० लाखले ट्रेलर हेरीसके पछि चलचित्रको गीत सार्वजनीक गरिएको हो । गीतमा नायक अनमोल केसीले नायिका साम्राज्ञी राज्य लक्ष्मीसँग रोमान्स गरेका छन् । हेर्कुलस बस्नेत र सोमिया बराइलीको स्वर रहेको म के भनुँ बोलको गीतमा हेर्कुलसकै शब्द, संगीत छ । गीतको कोरीयोग्राफी कविराज गह..
हाँस्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त भएका छन् । निगमले आज आफ्नो तीन वर्षे सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मुन्द्रेलाई ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त गरेको हो । एक कार्यक्रमकाबीच पर्यटनमन्त्री आनन्द पोख्रेलले मुन्द्रेलाई निगमको नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् । कार्यक्रममा बोल्दै ..
चलचित्र पशुपति प्रसाद आउँदो शुक्रबार (माघ १५) देखि प्रर्दशनमा आउँदैछ । चलचित्रको ट्रलेरले अहिले दर्शकको ध्यान तानीरहेको छ । यद्यपी, पशुपति प्रसादको व्यापार कस्तो होला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । सामाजीक कथावस्तुमा आधारीत पशुपति प्रसादले पशुपति वरपरको कथा भनेको छ । चलचित्रलाई सेन्सर बोर्डले युनीभर्सल सर्टिफिकेट पनि दिइसकेको छ ।..
नायिका करिश्मा मानन्धर नयाँ शक्तिको अन्तरीम परिषद्मा समावेश भएकी छिन् । डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनीक गरेको नयाँ शक्तिको अन्तरीम परिषद् सूचीको पाँचौ नम्बरमा करिश्मा मानन्धरको नाम छ । बाबुराम भेट्राई संयोजक रहेको परिषद्मा लामो समयको अमेरिका बसाई पश्चात स्वदेश फर्किएका नायक सरोज खनाल पनि छन् । यस्तै, अशोक शर्मा पनि नयाँ शक्तिको ..